एउटि महिलाले जन्माइन जुम्ल्याहा बच्चा, बाउ भने फरक फरक ! रहस्य खुलेपछी म’च्चियो हं’गामा ! – Life Nepali
एउटि महिलाले जन्माइन जुम्ल्याहा बच्चा, बाउ भने फरक फरक ! रहस्य खुलेपछी म’च्चियो हं’गामा !
एउटि महिलाले जन्माइन जुम्ल्याहा बच्चा, बाउ भने फरक फरक ! रहस्य खुलेपछी म’च्चियो हं’गामा ! रोचक । चीनमा जुम्ल्याहा छोराका फरक–फरक बाबु भएको पत्ता लागेपछि हं’गामा म’च्चिएको छ । यस्तो खबर पाएपछि बच्चाका बाबु दुःखी बनेका छन् । घ’टना केही महिनाअघिको हो । त्यहाँ एक पुरुषले आफ्ना जुम्ल्याहा बच्चाको जन्मदर्ता गराउने क्रममा जुम्ल्याहामध्येका एक बच्चा आफ्नो नभएको थाहा पाएका थिए । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
जन्मदर्ता गर्दा अनिवार्य रुपमा डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने नियमअनुसार ती बच्चाहरुको डीएनए परीक्षण गरिएको थियो । यस क्रममा एक बच्चाका पिता आफू नभएको ती पुरुषले थाहा पाएका हुन् । ती पुरुषको नाम खुलाइएको छैन । पछि थाहा भएअनुसार उनकी पत्नी परपुरुषसँग पनि यौन सम्बन्ध राखेको पाइयो । दुई पुरुषसँग छोटो समयमा यौ’न स’म्पर्क गर्दा यस्तो स्थिति आएको हुनसक्ने डा’क्टरले बताएका छन् ।
यस्तो केश करोडौंमा एक हुने डीएनए रिपोर्ट तयार पार्ने डाक्टरले बताएकी छिन् । डीएनए रिपोर्टका अनुसार आमा त एकै हुन् तर जुम्ल्याहा बच्चाका बाबु फरक फरक हुन् । पत्नीले परपुरुषसँगको स’म्बन्धका बारेमा पहिले नखुलाए पनि पछि भने स्वीकार गरेको र एक रातका लागि बाहिर पुरुषसँग स’म्पर्क गरेको स्वीकारेकी थिइन् ।
Previous यस्तो बेला महिलाहरुलाई शा’री’रिक स’म्बन्ध रा’ख्ने चा’हना बढी हुन्छ !